Rohan Galantamin Hydrobromide Manufacturers - Phcoker
SKU: 69353-21-5 Sokajy: Drug Smart
Ny ganidin'ny Hydropromide galantamine dia ny siramamy botônida gôlôbromida, ny alkaloid tertiary izay azo avy amin'ny voninkazo sy voninkazo narcissus ary ny maro hafa ao amin'ny fianakaviana Amaryllidaceae miaraka amin'ny antikolinetrazatra sy ny fihetsiketsehana tsy mihozongozona. Ny Galantamine dia manakana ny acetylcholinesterase, ka mahatonga azy ireo hifantoka sy hampivelatra ny asetylcholine (Ach). Ankoatra izany, ny galantamine dia ligand ho an'ny receptors acetylcholine nicotinic, izay mety hampitombo ny famoahana presynaptic ny Ach ary manetsika ny receptors postsynaptic. Ity mpiasa ity dia mety hanatsara ny asan'ny neurocognitive amin'ny alàlan'ny aretina Alzheimer malemy sy maoderina ary mety hampihena ny soritr'aretina amin'ny fiterahana izay mampiroborobo ny fifindran'ny sigara.
Ny Hydrobromide galantamine dia ny sirobamoto sirobombidin'ny galantamine, ny alkaloid tertiary azo avy amin'ny voninkazo sy voninkazo ao Narcissus ary ny maro hafa avy amin'ny fianakaviana Amaryllidaceae miaraka amin'ny anticholinesterase sy ny fihetsiketsehana tsy mihozongozona. Ny Galantamine dia manakana ny acetylcholinesterase, ka mahatonga azy ireo hifantoka sy hampivelatra ny asetylcholine (Ach). Ankoatra izany, ny galantamine dia ligand ho an'ny receptors acetylcholine nicotinic, izay mety hampitombo ny famoahana presynaptic ny Ach ary manetsika ny receptors postsynaptic. Ity mpiasa ity dia afaka manatsara ny asan'ny neurocognitive amin'ny alàlan'ny aretina Alzheimer malemy sy maoderina ary mety hampihena ny soritr'aretina amin'ny fiterahana izay mampiroborobo ny fifohana sigara.
Galantamine dia alkaloid phénanthrène ary toy ny fihenan'ny acetylcholinesterase, azo hivalozana. Tsy mifototra amin'ny rafitra fanafody fanafody acetylcholinesterase izy io. Ny fomba fiasa ofisialy nataon'i Galantamine dia midika fa ny fihenan'ny acetylcholinesterase, izay manakana ny hydrolyse ny acetycholine, mitarika amin'ny fihenan'ny acetylcholine amin'ny synapses cholinergique. Ny Galantamine ihany koa dia mamehy ny toeran'ny metaly nicotinic acetylcholine ary mety hanaparitaka ny hetsik'ireo agonista (toy ny acetylcholine) ao amin'ireo receptors ireo.
Ny voka-dratsin'ny vatana Galantamine Hydrobromide dia ahitana ny voan'ny tsindry sy ny fahalemena, ny hodi-kisendrasendra, ny olana amin'ny hoditra, ary ny tsy fahampian-tsakafo. Ny fanafarana dose avo amin'ny Galantamine raha tsy mitombo tsikelikely dia mety mahatonga tratra sy ahiahy koa.